Uzokhangisa kwiDFF obegconwa ngobududla - Ilanga News
Home Izindaba Uzokhangisa kwiDFF obegconwa ngobududla
Uzokhangisa kwiDFF obegconwa ngobududla
UZIBONA eshiyelana inkundla namamodeli omhlaba aseyibekile induku ebandla emkhakheni wePlus Size Models, uNkz
Khethiwe Dladla ongenye yamamodeli ondlekile azobe ekhangisa ngemfashini kwiDFF.
SISULEKE izinyembezi isiphalaphala saseClermont, eThekwini, siqokwa ngabeDurban
Fashion Fair (DFF) ukukhangisa ngengqephu embukisweni ohlelwa wuMasipala weTheku ngokubambisana nayo iDFF, ozokuba mhla ka-25-27 kuMandulo (September) e-Exhibition
Centre khan eThekwini.
UKhethiwe Dladla (26), ongesinye sezidudla ezimodelayo, ezizobe zikhangisa ngengqephu
kulo mbukiso oba minyaka yonke, uthi ngesikhathi esafunda emabangeni aphansi
ubengakwazi nokungenela imincintiswano yozime ngoba abaningi abefunda nabo
bebembiza ngamagama ayiziswana, bethi akakwazi ukumodela ngoba uyisidudla futhi ume kabi.
Uthi ngisho omunye wothisha wamtshela emehlweni ukuthi akakwazi ukumodela ngoba
umi kabi, okuyinto athi ukhule nayo, waphelelwa wukuzethemba nokuzithanda ngoba
konke lokhu ugcine esekukholwa.
Namhlanje uNkz Dladla usohlwini lwabawu-12 besifazane ababizwa ngePlus Size Models abazobe bekhangisa kwiDFF kanti uthi unethemba lokuthi angawudla umhlanganiso okungagcina kumenze waba wubuso be-DFF.
Le ntokazi ezwakala inokukhulu ukuzethemba, ithi yize ikhule ingazethembi futhi izenyeza ngomzimba wayo, igcine isibuyelwa wukuzethemba ngesikhathi isifunda eSithengile Secondary School eClermont, lapho bekunomncintiswano wozime, kukhona nowezidudla.
“Izingane ebengifunda nazo bezingincenga zithi ngingaphumelela mangizame ngingenele.
Ngigcine ngikwenzile lokho. Ngingene ngisaba kodwa ngithe sengiphakathi, ngazitshela ukuthi ngizophumelela noma kanjani.
“Kabakholwanga abaningi ngesikhathi ngiphuma isibili, okuyilapho ngifunde khona ukuthi kumele kuqale kimina ukuzithanda ukuze ngiphumelele,” kusho le ntokazi.
Ithi ngonyaka odlule ithe izihambela nje enxanxatheleni yezitolo, iThe Pavili-on, eWestville, eThekwini lapho isebenzela khona, yalandelwa ngowesifazane oyitshele ukuthi imi kahle, kayithandi yini ukuhlanganyela nezinye izidudla imodele.
“UMamsie Moloi ungixhumanise nentokazi eyaziwayo eThekwini, uNomalungelo Mkhize engifundise okuningi, ngazibona ukuthi ngempela kuningi engingakwenza kulo mkhakha. Ngithe noma sengibona isikhangiso sabeDFF befuna izidudla ezimodelayo, ngangenela ngaphandle kokusaba,” kusho yena.
Uthi ngelinye ilanga uyafisa ukuba sezingeni lokukhangisa emhlabeni jikelele njengoba ethi uzimisele ngokukhula kulo mkhakha.
“Ngifunde okuningi ngonyaka odlule njengoba besike siyomodela singakhokhelwa, kodwa engikuthandayo wukuthi ngihlomule ngokubuyelwa wukuzethemba nokuzithanda, okuyinto esengiyidlulisela nakwabanye besifazane abanemizimba,” kusho yena.
Uthi njengamanje bayaqeqeshwa njengoba belungiselelwa ukukhangisa kwiDFF.
“Njalo ngempelasonto siyaqeqeshwa siphinde sizivocavoce. Okunye engikuthandile wukuthi siyasekana ngokufana sisonke esizokhangisa,” kusho yena.
Le ntokazi izibona ngelinye ilanga ikhangisa namamodeli ondlekile, adume umhlaba wonke esingabala kuwona u-Ashley Green, uTara Lynn, uRobyn Lawley noMarquita Pring.
Previous articleUkhala ngokuzitshwa opikwe uRihanna
Next articleumdonsiswano kwi-pmb utd ngomdlali